Iziyobisi zePCT zokubuyisa -Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin
/Blog/fluoxymesterone , tamoxifen-citrate/Amachiza e-PCT okubuyisa –Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin
ezaposwa ngomhla 11 / 05 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo fluoxymesterone, tamoxifen-citrate.
Kwindawo yokwakha umzimba, indlela yokukhetha i-steroids efanelekileyo yokwakha umzimba ngumbuzo ozakuwubuza, kukho enye enye kwi-MuscleTalk, yindlela yokukhetha unyango lwe-post cycle (PCT) njengeClomid, Nolvadex kunye neLetrozole, Aromasin, Halotestin, i-Anastrozole ngokuchanekileyo. Namhlanje siza kukufundisa indlela yokukhetha iziyobisi ezifanelekileyo ze-PCT.
Yintoni Iziyobisi zePCT?
Unyango lomjikelo weposi (i-PCT) yindlela yokusebenzisa iziyobisi ezisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba, yinkqubo ebandakanya iikhompawundi ezithile, isondlo, kunye neziyobisi ezenziwa rhoqo ukunceda ukulawula amanqanaba e-estrogen, ukumisela kwakhona amanqanaba ehomoni kunye nokukubuyisela ukuya kwesiqhelo emva komjikelo weprohormones / steroids Uninzi lwee-anabolic steroids, ngakumbi ii-androgens, zibangela ukuthintelwa kwemveliso ye testosterone yomzimba. Xa umakhi womzimba ephuma kumjikelo we-steroid, ngokwendalo testosterone umveliso ungumlinganiselo kwaye amanqanaba ama-steroids athathwe egazini ayancipha. Oku kukushiya ama-hormone a-anabolic ephakamileyo yegazi, ngoko ke umzimba uphantsi kwe-catabolism, kwaye ngenxa yoko, ezininzi zezicubu zomzimba ezifunyenwe kumjikelezo ngoku ziya kulahleka. Ngoko ke, I-PCT iba yintswelo xa abanxibe impahlaNazi iziyobisi ze-PCT ezintandathu, siza kuzazisa kunye nomsebenzi wazo ohlukileyo kwi-PCT.
Iziyobisi zePCT Nolvadex
I-Nolvadex, eyaziwa nangokuthi i-Tamoxifen Citrate, ukusetyenziswa kweyeza olusisiseko kwe-nolvadex yonyango lweesibini zomhlaza wesifuba esandulelayo kunye nesithuba sokuqala kwabesetyhini bamadoda. Kunokusetyenziswa njengeziyobisi ze-PCT ekwakheni umzimba,
I-Nolvadex isetyenziswe kakuhle ekuncediseni ukukhulisa i-LH kunye ne-testosterone iyonke. Oku kuyakunceda ukuba uphinde kwakhona kumjikelo, okwenza ukuba lukhetho oluthandwayo kunyango lomjikelo weposi (PCT). I-clomiphene, indibaniselwano ye-tamoxifen yenye yezona ndlela zibalaseleyo zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwi-regim regiments ze-PCT. kwaye umzimba awusenzi eyayo testosterone; ngamagama alula, imveliso yakho ye testosterone yendalo iyavala.
Isebenza njani ngokukhuthaza i-hypophysis ukukhupha i-gonadotropins engakumbi, isebenza ngokumisa i-estrogen ekungeneni kwi-pituitary, eyenza ukuba ivelise i-LH. . Ngenxa yoko, izibonelelo zeNolvadex ziya kukunceda ukunciphisa nayiphi na ilahleko kwinzuzo yemisipha de umzimba wakho ukwazi ukuphinda ubuye.
Iziyobisi zePCT Clomid
I-Clomid, ebizwa ngokuba yiCommiphene Citrate, yi-SERM (i-modro-receptor modulator), efanayo ne-tamoxifen (nolvadex). Kugqithiseleyo unyango olusetyenziselwa ukukhutshwa kwe-ovulation, eluncedo kulabo abangenasiphelo.
Njenge-nolvadex, ii-okom ze-Clomid ngokukhuthaza i-hypophysis ukukhupha ii-gonadotropins ezingakumbi. I-Gonadotropins ziihormone zeprotein ezifihliweyo ziiseli ze-gonadotrope zedlala yebhinqa kwaye zikhuthaza ukukhutshwa ngokukhawuleza nangaphezulu kwe-follicle evuselela i-hormone (FSH) kunye ne-luteinizing hormone (LH). Xa ukwanda kwe-gonadotropins kusenzeka, ukunyuka kwe-LH kuya kunyusa amanqanaba e testosterone onke ukuvumela umsebenzisi ukuba agcine amanqanaba aphezulu e-testosterone ade umzimba wakhe ukwazi ukubuyela kwimeko yesiqhelo, yiyo loo nto kugcinwa inzuzo. (PCT) phakathi kwabo bajikeleza i-anabolic steroids.
Iziyobisi zePCT Letrozole
I-Letrozole, igama lomnxeba, u-Femara.Leli gciwane elisetyenziselwa ukunyanga iindidi ezithile zesifo somhlaza wesifuba (njenge-hormone-receptor-positive-cancer cancer). Kwakhona, esetyenziselwa iziyobisi ze-PCT, izidakamizwa ze-Letrozole zinciphisa inani le-estrogen elenza umzimba kwaye linceda ukunciphisa ukusabela kwamabhinqa.
I-Letrozole (isizukulwane sesithathu) ayisiyo-steroidal ekhethiweyo yesizukulwane sesithathu se-aromatse inhibitor efana neArimadex engazukukhupha iziphumo ze-androgenic. Iyafana kakhulu neArimadex yiyo loo nto bobabini babizwa ngokuba yi-Type2 non-sterodial competitive aromatase inhibitor. Umahluko ophambili phakathi kwe-Femara kunye ne-Arimadex kukuba i-Femara inamandla ngakumbi, kwaye ngexabiso lokhuphiswano. kwisandla, uya kuba nakho ukulahla i-gyno. Khumbula ukuba ungayisebenzisi ngexesha le-PCT njengengozi yayo kwi-libido kunye ne-lipids, kuphela ngexesha lomjikelo kwaye nceda ulumke kuyo kuba ichasene ne-estrogenic.
Iziyobisi zePCT Aromasin
Aromasin, ebizwa nangokuthi i-Exemestane,
Sisibulali se-Aromatase inhibitor esithintela i-Aromatase Enzyme ekudaleni i-Estrogen ebizwa ngokuba yi-Aromatase Inhibitor. Kwakhona, yi-steroidal AI eyigcina ichaphazela kakubi ii-lipids zakho njengezinye ii-non-steroidal AI. Ayisiyiyo ityhefu yesibindi, kwaye inokuqhutywa ixesha elide ngaphandle kwesiphumo esibi ngokuqinisekileyo yenye yezona zinto zithandwayo kubakhi bomzimba.
Isebenza njani i-Aromasin? Ayizukuyibulala ngokupheleleyo i-estrogen kwaye iyenza ingasebenzi indawo ebopha kumamkeli. I-Nolva iya kuthintela i-estrogen ekubeni ibophelele kwi-receptor kodwa … Yonke i-estrogen isadada ngokujikeleza isakhiwa. Ke xa uphuma ungaqala ukubopha kwakhona kwaye ikunike isaphulelo seGyno. Ungasebenzisa i-aromasin kumjikelo ngamnye kunye nepct.
Iziyobisi zePCT Halotestin
I-Halotestin, eyaziwa njenge-Fluoxymesterone.Fluoxymesterone yi-anabolic ejwayelekile ne-androgenic steroid eye isetyenziswe ekuphatheni i-hypogonadism okanye amanqanaba aphantsi e-testosterone kumadoda iminyaka.
Kwakhona kusetyenziswe kunyango lokubambezeleka kwindoda kunye nokunyanga kwama-breast poop.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba i-fluoxymesterone ihlelwe njenge-androgen, owona msebenzi uphambili weHalotestin okanye indlela yokusebenza kukujolisa kunye nokubopha kwi-androgen receptors.
Ngenxa yoko, ibizwa ngokuba yi-androgen receptor agonist; Cinga nje ngeyona nto inokuqalisa imisebenzi ye-androgens.
I-Androgens yimi hormone yamadoda echaphazela ukuphuhliswa nokugcinwa kwempawu zesini zesini. Ukongeza, kunoku:
Ukuphucula i-anabolism yamaprotheni
Nciphisa i-catabolism yama-amino acids
Ukuphucula ukugcinwa kwemilinganiselo yeekhemikhali ezibalulekileyo kuquka ne-potassium, i-phosphorus kunye ne-nitrogen
Ukukhawulela kunye / okanye ukuvimbela i-estrogen receptors
Ikhono le-fluoxymesterone ukuvimbela i-estrogen receptors yenye yeenjongo eziphambili ezisetyenziselwa ukonyango lweesifo somhlaza wesisu.
Iziyobisi ze-PCT i-Anastrozole
U-Anastrozole luhlobo lwe-2 olungenayo i-steroidal inomthamo we-aromatase inhibitor (isizukulwana sesibini) enomsebenzi ngokuthintela i-enzyme ye-aromatase (i-chromosome P450), i-enzyme eyona nto enoxanduva lokuguqulwa kwe testosterone kwi-estrogen..Nokunyusa i-testosterone, i-estrogen esezantsi (kodwa kakhulu), kwaye ulondoloze amalunga aphilileyo kunye neepidid.
I-Arimidex isebenza ngokukhuthaza imveliso ye testosterone yendalo leyo ingumbono kunye nesizathu sokuba wenze isicwangciso se-PCT kwaye iyakwenza njalo kwinqanaba elikhulu kakhulu. Nangona kunjalo, njengoko injalo indalo iya kunciphisa kakhulu isixa se-estrogen emzimbeni kwaye ngexesha le-PCT injongo ye-ur ayisiyi kuphela ukuqala kwakhona imveliso ye-testosterone yendalo kodwa yenza ukuba imizimba yethu ibuyele kumanqanaba aqhelekileyo emveliso yehomoni. I-Estrogen ihlala ijongwa njengotshaba kodwa enyanisweni yihomoni ebaluleke kakhulu emzimbeni, ngakumbi xa sijonga ukubaluleka kwayo ekugcineni amajoni omzimba asebenza ngokufanelekileyo. Ngesi sizathu, ii-SERM lukhetho olungcono kakhulu lokusebenzela injongo yokukhuthaza imveliso ye testosterone yendalo ngexesha lesicwangciso se-PCT; Ii-SERM ezinje ngeNolvadex kunye neClomid zihlala zikhetha okuhle, kwaye ngokwexabiso, liphezulu kakhulu kunamachiza amathathu okuqala esiwavelisileyo ekuqaleni kwendlela, nangona kunjalo, akukho mathandabuzo okuba iArimadex inamandla njengoko ibhloka ngaphezulu kwama-95. Ipesenti ye-estrogen ngaphakathi koxinzelelo oluphezulu, kufutshane neLetro kodwa ayinamandla kangako.
Uyenza njani i-Testosterone Cypionate egqityiweyo kwiPowder Steroid Powers	Yintoni i-Oxandrolone powder esetyenziselwa yona?